MM FENG SHUI STUDY: ဖုန်းရွှေဆိုတာ...
အသံထွက် အမှန်အားဖြင့် “ဖုန်းဆွေ” လို့ ထွက်ရတဲ့ Feng Shui (風水) ဖုန်းရွှေပညာရပ်ဟာ အရာဝတ္ထုတွေ၊ သက်မဲ့ပစ္စည်းတွေကို ထားသို နေရာချထားခြင်းကနေ သင့်ရဲ့ သက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘယ်လို သက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်စေမှာလဲ ဆိုတာကို အဓိက လေ့လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ စီးဆင်းနေတဲ့ ချိဓာတ် (氣 - Qi Energy Flow) တွေ ရှိပါတယ်။ ဒီဓာတ်တွေဟာ သင့်ဆီမှာရှိတဲ့ ဓာတ်စွမ်းအင် (Personal Energy Flow) တွေကို အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖြစ်စေပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် ဓာတ်စွမ်းအင်တွေက သင့်ရဲ့ အတွေးအခေါ် အပြုအမူတွေကို အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖုန်းရွှေပညာရပ်ဟာ သင့်ရဲ့ တစ်နေ့တာမှာ ဖြစ်ပျက်လှုပ်ရှားနေသမျှတွေနဲ့ (သင်က သတိမပြုမိသည့်တိုင်) သက်ဆိုင်နေပါတယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
နမူနာဆိုရမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးချူချာနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကုတင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ချိဓာတ်ကို ဆွဲဆောင်စီးဆင်းစေတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေ ချိတ်ဆွဲလိုက်ခြင်းဖြင့် အမြန်ဆုံး နလန်ပြန်ထူလာနိုင်တာမျိုးပါ။ အခြားတစ်ဘက်မှတွေးရင်ဖြင့် သင့်အိမ်၊ အိပ်ခန်း စတာတွေမှာ အရာဝတ္ထုတွေကို နေရာအထားအသို မမှန်ကန်ခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးတွေကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ကောက်ချက်ကို ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ချိဓာတ်တွေရဲ့နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် သက်ရောက်မှုကို ဒီအောက်က ပုံ ၃ခုကို ကြည့်လိုက်ရင် ပိုနားလည်သွားမှာပါ။
ပထမပုံက လူတစ်ယောက်နဲ့ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်စွမ်းအင်တွေကို ရည်ညွှန်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယပုံက သက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတဲ့ ချိဓာတ်တွေ လူဆီကို စီးဆင်းလာတာကို ပြပါတယ်။ တတိယပုံမှာ သက်မဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခု နေရာချလိုက်ခြင်းကြောင့် လူဆီကို လာနေတဲ့ ချိဓာတ်တွေရဲ့ လမ်းကြောင်း သွေဖီသွားပုံကို တွေ့နိုင်ပါမယ်။
ဒီတော့ ဖုန်းရွှေဆိုတာဘာလဲလို့ မပြောခင် ဘာတွေက ဖုန်းရွှေ မဟုတ်ဘူးလဲ ဆိုတာ အရင်ဆုံးနည်းနည်း စဉ်းစားကြည့်ကြပါစို့။ ဖုန်းရွှေဆိုတာ...
အိမ်တွင်း ပရိဘောဂတွေကို အဆန်းတကြယ် နေရာချပြီး သင့်ကို နေ့ချင်းညချင်း ကြီးပွားသွားစေနိုင်တဲ့ အရှေ့တိုင်းက အိမ်အတွင်း ဒီဇိုင်းချတဲ့ (Interior Design) ပညာ မဟုတ်ပါဘူး။
လက်တွေ့နယ်ပယ်ကနေ ကင်းကွာနေတဲ့ ဂမ္ဘီရဆန်တဲ့ အယူသည်းတဲ့ ဂန္ဓာရီပညာ မဟုတ်ပါဘူး။
သင့်နေအိမ်၊ ပန်းခြံတွေကို အလှဆင် ဖန်တီးတဲ့ နည်းပညာ မဟုတ်ပါဘူး။
တစ်ညနေခင်းအတွင်းမှာပဲ ပြီးအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ လွယ်ကူသက်သာနည်းပညာ မဟုတ်ပါဘူး။
လူကုံထံတွေပဲ သုံးစွဲနိုင်တဲ့ ဇိမ်ခံနည်းပညာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါဆိုရင် ဖုန်းရွှေ ဆိုတာ ဘာလဲ။ စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပါ။ ဒီနေရာမှာ အရေးအကြီးဆုံး မေးခွန်းတစ်ခုကို မေးချင်ပါတယ်။ အဲဒါက...
လူက သဘာဝကို ပြုပြင်တာလား၊ သဘာဝက လူကို ပြုပြင်တာလား။
ဒီမေးခွန်းရဲ့ အဖြေကို စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် သဘာဝတရားတွေကနေ၊ လူလုပ်အဆောက်အဦတွေ၊ စက်ရုံတွေ ဖြစ်တည်လာတာတွေကို တရေးရေးမြင်လာပါလိမ့်မယ်။ လူသားတွေ နေထိုင်လာတဲ့ မြို့ပြစနစ်တွေ တိုးတက် ဖြစ်ထွန်းလာတာနဲ့အမျှ သစ်တောနဲ့ မြေဆီလွှာပြုန်းတီးမှုတွေ ရှိလာတာတွေကို မြင်မိပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဖန်လှောင်အိမ်ကြီးလိုဖြစ်ပြီး ယိုယွင်းလာတဲ့ ဂေဟဗေဒစနစ်ကြီးကို သွားသတိရကြ ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီစနစ်ဆိုးတွေကြောင့် လူသားတွေနဲ့ ကျန်းမာရေးတွေ ဆုတ်ယုတ်လာတာ၊ ရောဂါဘယ ထူပြောလာတာတွေကို တွေးမိပါလိမ့်မယ်။ စက်ဝန်းတစ်ပတ်လည်အောင် စဉ်းစားခန်း ထုတ်မိပြီးတဲ့အခါမှာ ခေါင်းရှုပ်စွာနဲ့ပဲ လက်တွေ့ကျတဲ့ အဖြေကို တောင့်တမိတယ်ဆိုရင် သင်ဟာ ဖုန်းရွှေ ဘာလဲဆိုတာ သိသင့်ပြီလို့ ယူဆလိုက်ပါတော့။
အပေါ်ယံကြည့်မယ်ဆိုရင် ဖုန်းရွှေဆိုတာ လူသားနဲ့ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ကူးလူးဆက်နွယ်မှုကို လေ့လာတဲ့ ပညာလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဆင့်တက်ပြီး ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီလိုဆက်နွယ်နေတဲ့ စွမ်းအင်တွေကို ဖုန်းရွှေနည်းပညာတွေနဲ့ ထိမ်းချုပ်ကွပ်ကဲပြီး သင့်နေ့စဉ်ဘဝမှာ တိုးတက်ဖြစ်တည်မှုတွေ ရှိလာအောင် ဖန်တီးယူနိုင်ခြင်းပါ။ သင်နဲ့ သင့်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် (Surrounding) ကို လည်ပတ်နေတဲ့ စွမ်းအင်စီးကြောင်းတွေရဲ့ စည်းစနစ်နဲ့ထဲမှာ သဟဇာတဖြစ်အောင် ထိန်းညှိတည့်မတ်ပေးခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်အားဖြင့် သင်ကော သင့်ဘဝဟာ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သဟဇာတ ဖြစ်သွားတာပါပဲ။
ဖုန်းရွှေကို နေရာချခြင်း အနုပညာလို့လည်း တချို့က တင်စားကြပါသေးတယ်။ သင့်ရဲ့ ပရိဘောဂတွေ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ၊ ပြီးတော့ သင်ကိုယ်တိုင်ကိုပါ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘယ်လိုနေရာချထားတယ် ဆိုတာကနေ သင့်နေ့စဉ်ဘဝ ကြုံတွေ့မှုတွေရဲ့ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကိုပါ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖုန်းရွှေက သင်ကိုယ်တိုင်ရော၊ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါ ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်အောင် ဖန်တီးပေးတဲ့ ထူးခြားတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါသေးတယ်။ သင်နဲ့ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကြားမှာ သဟဇာတဖြစ်ဖို့၊ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်ဖို့၊ စည်းစနစ်ကျနဖို့ တခြားနည်းလမ်းတွေက ဆောင်ရွက်ဖို့ ခက်ပေမယ့် ဖုန်းရွှေက ဆောင်ယူဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။
သဘာဝတရားနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ နေထိုင်ပြီး နေ့စဉ် တိုးတက်မှုတွေ ရှိအောင် ဖန်တီးပေးတဲ့ ဒီနည်းစနစ်ကို ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ ပညာရှင်တွေ လက်တွေ့အသုံးချခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖုန်းရွှေဟာ အခြေအမြစ်ရှိပြီး လက်တွေ့ကျတဲ့ ပညာ ဖြစ်တာကြောင့် သင့်ရဲ့နေထိုင်၊ လုပ်ကိုင်မှုတွေကို ကူညီတည့်မတ်ပေးနိုင်တယ် ဆိုတာကို ယုံကြည်လိုက်ပါတော့လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
Posted by MM Feng Shui Study at 8:54 AM
Aung Ko Ko (E.C) said...
I want to know more. Could you pls?